यसरी लुट्यो मेरो जवानी | Kamsastra
Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, यसरी लुट्यो मेरो जवानी,
आफ्नो जवानी सुम्पिएको भोलिपल्ट म बिहानै उठेर अफिस जान तयार भएँ । तर ममा त्यति उत्साह भने थिएन । तै पनि बल्लतल्ल आफैंलाई बेचेर भए पनि हासिल गरेको जागिर गुमाउन मन लागेन । खाना खाएर म अफिस पुगेँ । मलाई हाजिर पुस्तिका देखाइयो र हाजिर गर्न लगाइयो । अनि केही बेरमा उही सुपरभाइजर आयो र भन्यो, 'तिमी हिजो मैले देखाएको साइटमा जाऊ, अहिले यहाँबाट गाडी जान्छ, त्यसैमा जानु ।' अनि उसले मलाई दिपकले भनेअनुसार काम गर्नु भनेर अर्थ्यायो ।मलाई अघिल्लो दिनको कुरा सम्झेर उसको मुख हेर्न निकै लाज लागिरहेको थियो । उसले मलाई कामबारे सम्झाउँदा मेरो मुहार जमिनतिर झुकेको थियो ।
केहीबेरमा हामी अफिसमै मोटर चढेर साइटतिर गयौं । खटाइएअनुसार काम गरेँ । मैले लेबरहरुको काम रेखदेख र मुल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । तर मेरो वास्तविक काम यो नभएर उही सुपरभाइजरको यौन प्यास मेट्ने नै मुख्य काम हुने हो कि भन्ने चिन्ता मभित्र कताकता थियो । दिउँसो ऊ साइटमा आएर मलाई फेरि हेटौंडातिर लान्छ कि भन्ने भय थियो मेरो मनमा । त्यसैले म उ आउने बाटोतिर बारम्बार नजर लगाउँथे । तर चार बज्दासम्म ऊ आएन । अनि म ढुक्क भएर फर्किएँ । अफिस गएर दिनभरीको कामको विवरण भरेर म घर गएँ ।
यसैगरी तीन दिन बित्यो । तर चौथो दिन हामीसँगै सुपरभाइजर पनि साइटतिरै लाग्यो । अफिसको मोटरमा चालक बस्ने एउटै लाइनमा सीट थियो, पछाडी सामान राख्ने र केही लेबर बस्नेगरी खुल्ला थियो । त्यसैले म सुपरभाइजर र इन्जिनियरसँगै बसेर जानुपर्ने भयो । मलाई ढोकापट्टी राखेर सुपरभाइजर बीचमा बस्यो अनि इन्जिनियर चाहीँ चालकछेउ बस्यो । बाटोमा सुपरभाइजरले मेरो स्तनमा कुहिनो दल्न खोज्दै थियो । तर मैले आफ्नो शरीर नै बंग्याएर झ्यालपट्टी फर्काएर जोगिने प्रयास गर्थेँ । ऊ इन्जिनियरसँग कुरा गर्दै मतिर ध्यान नदिएजस्तो गर्दै थियो । तर ऊ आफ्ना तिघ्राले मेरा तिघ्रा ठेल्ने गर्थ्यो । म केही पर सर्न खोज्थेँ तर ठाउँ नै थिएन । केही बेरमा उसले मेरो शरीर पछाडी सीटमा हात तेर्स्यायो । अनि झ्यालतिर हात पुर्याएजस्तो गरी उसले मेरा स्तनतर्फ औंला ल्यायो । उसले आफ्नो औंलाले मेरा स्तनलाई घोच्न थाल्यो । कुत्कुती लागेपछि मैले काखीचेप्दै उसका हातलाई पन्छाउन खोजेँ । उसलाई केही भनौं त इन्जिनियर र चालकका अगाडी त्यस्तो कुरा कसरी गर्नु ? नभनौं त ऊ मेरा स्तनलाई छेउतिरबाट दुई औंलाले निमोठ्न थालिसकेको थियो । बल्लतल्ल साइटमा पुग्यौं । केहीबेर उसले स्टाफहरुलाई अर्थ्यायो । अनि इन्जिनियरलाई हेटौंडा जाउँ भन्यो । मलाई डर लाग्न थाल्यो । कतै उसले मलाई पनि जाउँ भन्ने त होइन ? नभन्दै जेको डर थियो, त्यही भयो । 'उसले भन्यो कबिता, तिमी पनि हिडँ, तिमीलाई अरु काम पनि जिम्मा लगाउनु छ ।' अफिसको काम भनेपछि जान्न भन्नु पनि कसरी ? जाउँ त उसले फेरि मलाई खेलौना बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता । रातोमाटे पुगेपछि इन्जिनियर उत्रियो । मलाई अब भने पक्का भयो, आज पनि मेरो शरीर लुटिन्छ भन्नेमा । बाटोमा केही कुरा नभएपनि इन्जिनियर उत्रिएपछि भने उसले मलाई भन्यो, 'अस्तिकै ठाउँमा जाउँ, खाजा खाउँ अनि तिमी नयाँ साइट जाऊ ।'
मैले चालकको अगाडी सबै कुरा भन्न उचित ठानिनँ । आखिर यसले त्यही कोठामा लैजाला, बरु एक्लै योसँग आज स्पष्ट कुरा भन्छु भन्ने सोचेर मैले मुन्टो हल्लाएर उसका कुरालाई स्वीकृती जनाएँ । होटलमा पुगेपछि उसले चालकलाई मोटरमा तेल भर्न र खाजा खान भनेर पैसा दियो । अनि भन्यो, '३ बजेतिर आइपुग्नु ।'
भर्खर साढे ११ बजेको थियो, तीनबजेसम्मका लागि उसले मोटर पठाउनुको उद्देश्य कतै मसँग त्यतिन्जेल मस्ती गर्ने सोच पो बनाएको हो कि ? डर लाग्नु स्वाभाविक थियो । उसले खसीको तास, चिउरा र चिसो मगायो । अनि उसले आफ्नो लागि बियर पनि माग्यो । मैले अफिसको ड्युटीमा पनि सर त बियर खानुहुँदो रहेछ भनेर कुरा निकालेँ । उसले भन्यो, 'थकाइ मेट्छ क्या ।' मैले उसलाई फकाउने सोचले कुरा निकालेँ । 'सर आज त अलि चाँडो घर जानुपर्ने थियो ।' उसले सोध्यो, 'किन ?' मैले भनेँ, 'घरमा काम छ, आमा बिरामी हुनुहुन्छ ।'
'भरे जाँदा बरु म पनि सँगै जान्छु नि, भाउजुलाई डाक्टरको लैजानुपरे म लैजाउँला, त्यसको तिमी चिन्तै नगर ।' उसको जवाफ थियो । अब उसलाई मैले भन्ने केही कुरै रहेन । खाजा खाइसकेपछि उसले मलाई उही कोठामा लग्यो । सुन कबिता, आज म निकै खुशी छु, रिल्याक्स पनि । तिमीलाई अप्ठ्यारो लागेजस्तो छ, तिमी पनि रिल्याक्स हुन सिक । उसले यतिभन्दा नभन्दै ढोका लगाइसकेको थियो । अनि आफ्नो सर्ट र पाइन्ट खोल्दै भन्यो, 'जीवनमा सबैकुराको भोग गर्नुपर्छ, खुशी आफैं आउने होइन, खुशी हुन जान्नुपर्छ ।' मैले भने, 'तर सर म यस्तो काम गर्दिनँ, तपाई मेरो जीवन बर्बाद नगरिदिनुस् । मैले एकपटक तपाईको आग्रह मानेर त्यस्तो गरिहालेँ तर अब तपाईले पनि मेरो कुरा मान्नु पर्छ ।' 'तिम्रो यही कुरा त मलाई मन पर्दैन,' उसले भन्यो, 'सेक्स गर्दा तिम्रो के बिग्रिन्छ ? फेरि म त ढाल लगाएरमात्र गर्छु, कुनै डर हुँदैन । च्यातिने होइन, थोत्रो हुने होइन, त्यो त मासु न हो, शरीरभित्रको मासु ।' अनि उसले मेरो कुममा हात राख्यो । मैले भने, 'नाइ सर आज हुँदैन ।'
अचानक उसले मलाई खाटमा पल्टायो र ममाथि घोप्टियो । मलाई रुनमात्र आयो, केही बोल्नै सकिनँ । भक्कानो फुटेर आयो, अनि आँशु झार्दै रोएँ । उ मेरो शरीरमा आफ्नो शरीर पुरै सुताएर मेरो अनुहार हेर्दै थियो । म भने उप्रति रुदैँ दयाको भिख मागिरहेकी थिएँ । तर उसले हात सार्न थाल्यो, मेरा स्तनतिर ल्याउन । मैले आफ्ना दुबै स्तनलाई हत्केलाले ढाकेँ । उसले मेरा दुबै हात आफ्नो दाहिने हातले समात्यो र मेरा स्तनमाथि मुख दल्यो, मानौं त्यो कुनै माटोको ढिस्को हो, त्यसलाई ऊ मुख दलेरै भत्काउन चाहन्छ । उसको मुहारको घर्षणले मलाई दुखाइरहेको थियो, तर पनि म सहन बाध्य थिए । एक पटक त उसले आफ्नो दाँतले मेरो देब्रे स्तन टोक्यो । मैले 'ऐया' भनेँ । उसले ढाडस पार्दै भन्यो दुख्यो, ? 'अँ' मेरो जवाफ थियो ।
अनि उसले मेरो स्तन मुसार्दै भन्यो, 'सरी है ।' म केही बोलिनँ । अनि ऊ आफ्नो लुगा खोल्न थाल्यो । सर्ट, पाइन्ट, गन्जी हुँदै उसले पेन्टी पनि खोल्यो । म उसको त्यो यौन प्यासलाई घृणाका नजरले नियाँलीरहेकी थिएँ । त्यसपछि मेरो छेवैमा आएर ऊ बस्यो । अनि मेरो दाहिने हात आफ्नो लाडोमा लगेर राखिदियो । सायद ऊ मैले लाडो खेलाइदियोस् भन्ने चाहिरहेको थियो । तर मैले त्यहाँबाट हात झिकेँ । उसले फेरि त्यहीँ मेरो हात लग्यो र भन्यो, 'किन डराएकी ? अस्ति कै दिन सिल तोडिएको होइन र ? अब के को लाज ?' उसले फकाउँदै भन्यो, 'अब त फ्री भएर रमाइलो गर्नुपर्छ । यस्तो कुरामा लाज मानेर मजा लिन सकिदैंन । आउ... ।'
'मलाई मजा चाहिएको छैन ,' मेरो जवाफ थियो । 'ओहो तिमी त जहिल्यै पनि भर्जिन कै जस्तो कुरा गर्र्छौ बा ।' उसले यति नभन्दै मलाई खाटमा पल्टायो । अनि ममाथि मडारिन थाल्यो । मेरा खुट्टालाई आफ्ना खुट्टाले बाँधेर मलाई बेस्सरी थिचिरहेको थियो । मेरा स्तनमा घरीघरी हात ल्याउँथ्यो र निचोर्थ्यो । अचानक ऊ घुँडा टेकेर बस्यो । अनि मलाई एक नजरले हेर्यो । ऊ जोशले जागिसकेको राक्षस जस्तो भइसकेको थियो । उसको अनुहार रातो भइसकेको थियो । फटाफट उसले मेरा लुगा खोल्दै भुइँतिर फाल्न थाल्यो । मलाई नांगो बनाउन उसलाई एक मिनेट पनि लागेन होला ।
अनि मेरो खुट्टा फट्याएर पुती नियाँल्न थाल्यो । हातले केही बेर चलायो । मलाई काउकुती लाग्यो । हत्केलाले पुती निकैबेर रगड्यो । कहिले भुत्ला चलाउने, कहिले पुतीको डिलमा औला दल्ने, कहिले औंला पसाउन खोज्ने गर्दै निकैबेर उसले खेलायो । म आँखा चिम्लिएर उसका स्मर्शलाई स्वीकार्दै गएँ । एकछिन ऊ शान्त भएझै लाग्यो । तर मैले आँखा खोलिनँ । केहीबेरमा उसले मेरा दुबै हात समात्यो । त्यतिन्जेल मेरो ओठतिर उसले लाडो ल्याइपुर्याइसकेको रहेछ । मैले आँखा खोलेँ । लमतन्न उसको लाडो पसारिएको थियो । अनि उसले मेरो ओठमा दल्न थाल्यो । मलाई घिन लाग्यो र मुन्टो अर्कातिर फर्काएँ । मेरो चिउँडो समातेर उसले लाडो दल्न थाल्यो । 'यो के गरेको ?' मैले भनेँ । 'यसलाई माया गर न लाटी ।' उसले छिल्लीदैं भन्यो । 'मैले तपाइँ यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ, मलाई छोड्दिनुस्,' मैले भनेँ । तर ऊ किन मान्थ्यो । मेरा स्तनलाई लाडोले घोच्न थाल्यो । मलाई यताउता पल्टाउँदै जिउभरी लाडो दल्यो । मलाई सिकसिको लागिरहेको थियो । एक दुइ पटक त मैले हातले समातेरै उसको लाडो हटाउने प्रयास पनि गरेँ । तर एकतिरबाट हटाउन नपाउँदै उसले अर्कोतिर दल्न भ्याइसकेको हुन्थ्यो । निकैबेर यो क्रम चल्यो । म हैरान हुँदै गएँ । उसले मलाई जुरुक्क उठायो र काखमा राख्यो । उसको लाडोमाथि मेरो चाक परेको थियो । लाडो जुर्मुराएको स्पष्ट अनुभव मैले गरिरहेकी थिएँ । ऊ चाहीँ मेरो काखीमुनीबाट हात छिराएर मेरा दुबै स्तन च्याप्प समातेर बसेको थियो । स्तनको मुन्टो खेलाउँदा मलाई खुब काउकुती लाग्थ्यो । उसले आफ्नो छातीमा मेरो ढाड टाँसेको थियो । मैले उसको शरीरको ताप महसुस गरेँ । अचानक मलाई घोप्टो पार्यो । अनि मेरो शरीरमा ऊ लम्पसार भयो । चाकको चेपमा उसले लाडो दल्न सुरु गर्यो । मरो जिउ नै सिरिंग भयो । यत्तिकैमा मेरो चाक फट्याएर उसले नियाँल्यो । अनि प्वालमा मुखभरीको थुक खसाल्यो । अनि आफ्नो औंलाले चलाउन सुरु गर्यो । म डराएँ । यो पागलबाट कसरी छुट्कारा पाउने भन्ने चिन्ताले छट्पटाएँ । उसले एउटा औंला मेरो चाकमा बिस्तारै पसाउन खाज्यो । मलाई असजिलो भयो र उठ्न खोजेँ । तर मलाई ठेलेर उसले उठ्न दिएन । अनि चाकमा लाडो अड्यायो । ऊ धक्का लगाउन खोजिरहेको थियो । तर मैले चाक बंग्याएर छलेँ । त्यसपछि ऊ मेरो त्रि्रा चेपेर टुक्रुक्क बस्यो । अनि लाडो फेरि सोझ्यायो । प्वालमा तेर्स्यासकेपछि उसले भित्र ठेल्न बल गर्यो । मलाई साह्रै दुख्यो तर उसले मेरो शरीर थिचेर चल्नचरपटाउन दिएन । 'ऐया...बा..' म कराएँ । चाकको प्वालमा उसको लाडोको टुप्पोमात्र पसेको थियो । तर उसले त्यसभन्दा भित्र पनि ठेलेन र बाहिर पनि निकालेन । मेरो चाकले उकुसमुकुस अनुभव गर्यो । अनि केही बेरमै उसले लाडो ठेल्न थालिहाल्यो । फेरि दुख्यो, पहिलाको भन्दा धेरै दुख्न थालेको थियो ।
उसले सोध्यो, 'अब सुरु गरौं त ?' मैले केही भनिनँ । उसले मलाई लाडोतिर इशारा गर्दै भन्यो, 'यसलाई एकचोटी म्वाई खाउ न त ।' तुरन्तै मेरो मुखबाट निस्कियो, 'नाइ..पर्दैन ।' 'त्यसो भए हातले खेलाउ न त ।' बरु त्यही ठिक लाग्यो र समाइदिएँ । निकै कडा हुँदो रहेछ । च्याप्प मुठीमा कसेँ । एक पटक त निमोठिदिउँजस्तो पनि लाग्यो । केही बेरमा उसले मलाई उत्तानो पारेर सुतायो अनि आफ्ना काँधमा मेरा खुट्टा फट्याएर चढायो । दाहिने हातले लाडोलाई पुतीको मुखमा राख्यो । मैले उसलाई भनेँ, 'अस्ति लगाएको जस्तो लगाउनु पर्दैन ? यत्तिकै नगर्नु, बच्चा बस्छ ।' तर उसले आफूसँग नभएकोले आज यत्तिकै गरौं भन्यो । डराउँदै मैले भनेँ, 'त्यसो भए त नाई ।' 'केही हुँदैन म माल बाहिरै झार्छु, भित्र झारे पो बच्चा बस्छ त ।' उसले भन्यो । मैले उसलाई मनाउन प्रयास गरेँ तर सकिनँ । 'सबै जिम्मा म लिउँला भएन र ?' उसले लाडो भित्र ठेल्दै भन्यो । मेरो शरीर रनक्क भयो । उसले टुप्पोमात्र पसाएर केहीबेर तिघ्रा मुसार्यो । अनि घुँडा धसेर ऊ तयार भयो । बिस्तारै उ बल गर्न थाल्यो, सुरुसुरुमा उसले धेरै भित्र पसाउने प्रयत्न नै गरेन । हल्का भित्र ठेल्ने र बाहिर निकाल्ने गरिरहेको थियो । मेरा हात अचानक आफ्नो पुती सुम्सुम्याउन पुगेछ । रसिलो भइसकेको पाएँ । उसले मेरा तिघ्रा बेस्सरी कस्यो । अनि बल लगाउन थाल्यो । अब भने ऊ पुरै जोशमा देखियो । एक पटक जोडले ठेल्यो । मलाई दुखेको अनुभव भयो । तर सहेर बसेँ । उसले ठेल्दै निकाल्दै गर्यो । अनि एक्कासी आफ्नो गति बढायो । भित्रसम्म धसाएर पेलिरहेको थियो । क्याच..क्याच आवाज निस्किरहेको थियो । चिल्लो बढेर केही सजिलो हुँदै थियो भने दुखाइ पनि कम भएको महसुस भयो ।
उसले केही जवाफ दिएन । मेरो कुरा नसुनेझैं गरी उ मच्चिरहेकै थियो । बरु ऊ अझ जोडले पो मच्चिन थाल्यो । म पसिनाले निथ्रुक्कै भएँ । शरीर पनि निकै तात्यो । लाडो भित्र पस्दा कच्याक..कच्याक.. आवाज निस्किन्थ्यो । ताली बजाएको गतिमा ऊ मच्चिन थाल्यो । छट्पटीले मेरो टाउको मडारिन थालेको थियो । मेरो आँखामा आँखा जुधाएर ऊ भने भएभरको बलले पेल्दै थियो । हुँदाहुँदै मेरो शरीर शिथिल भयो । त्यसको केही बेरमा बल्ल ऊ पनि शिथिल भएर ममाथि लम्पसार पर्यो । केही बेरमा उसले भन्यो, 'बाहिर झार्छ भनेको त सकिएन ।' उसको कुराले मलाई डर लाग्यो । सोधेँ, 'के भयो ?' उसले भन्यो, 'माल भित्रै झर्यो ।' 'ममी...' म भयभीत भएँ । अनि रुन थालेँ । उसले मरो केश सुम्सुम्याउँदै भन्यो, 'धन्दा नमान, केही पनि हुँदैन, बच्चा नबस्न पनि सक्छ, बस्यो भने म छँदैछु ।' केहीबेर पछि उसले मेरा स्तन फेरि माड्न थाल्यो । मैले भनेँ, 'लु अब भयो, म जान्छु ।'
उसले मलाई धम्क्याउन थाल्यो, 'फेरि भोलि केही भयो भने मलाई नभन्नु नि ।' म झन डराएँ । अब त उसको कुरा मान्नुमा नै मेरो भलाई थियो । अनि उसले मेरो पुती सुम्सुम्यायो । केही क्षणमै उ यसरी जुर्मुरायो कि मलाई कर्यापकुरुप पार्न थाल्यो । उसले मेरो शरीरको जताततै चुम्बन गर्यो । अनि लाडोलाई फेरि हुल्न थाल्यो । यो पटक पनि उही रफ्तारमा दनादन पेल्यो । मलाई अब पीडा हुन थालिसकेको थियो । 'ऐया.. ऐया..' भनेर भए पनि मैले उसलाई निकैबेर साथ दिएँ । मेरा शरीर कुनै प्रतिक्रिया नै जनाउन नसक्ने गरी थाकिसकेको थियो । शिथिल भएर उसका प्रहारलाई सामना गर्नुबाहेक म सँग कुनै विकल्प नै थिएन । भत्भती पोल्न थाल्यो । तर पनि उसले छोडेन । मैले निकै बेर सहेपछि बल्ल ऊ शान्त भयो । केहीबेरमा हामी दुबै उठेर लुगा लगाएर हातमुख धोयौं अनि फर्कियौं ।
Labels: Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, यसरी लुट्यो मेरो जवानी